Fiparitahan'ny valan'aretina :: Miakatra hatrany ny isan’ireo olona voan’ny tazomoka • AoRaha
Fanairana. Tsy mitsaha-mitombo ny isan’ny olona voan’ny tazomoka amin’izao fotoana izao. Faritra dimy ambin’ny folo no nahitana trangan’aretina betsaka sy niakatra kokoa raha noharina tamin’ny taha mahazatra tamin’ny 27 janoary hatramin’ny 16 febroary 2020. Anisan’ny mbola nahitana an’izany ny faritra Analamanga, any amin’ireo kaominina vitsivitsy tany Ankazobe.
Manampy azy ireo ny faritra Alaotra mangoro, Amoron’i Mania, Anosy, Atsimo Andrefana, Diana, Bongolava sy ny maro hafa. Nahitana an’io soritr’aretina io avokoa ny 60 % maherin’ireo olona nafana hoditra ka nanaovana fitiliana tany amin’ny distrika sasany, toy ny tany Iakora sy Ivohibe.
“Ny 64%-n’ireo fito amby roapolo sy dimanjato nanaova fitiliana no fantatra fa voan’ny tazomoka tany Iakora. Nahatratra 87% ho an’ny tany Kominina Vohimary any amin’ny distrikan’Ivohobe. 70% ho an’ny kaominina Antambohobe, distrikan’Ivohibe”, araka ny tatitra avy amin’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka, teny Ambohidahy, omaly.
Nitombo be ny isan’ireo olona voan’ny tazomoka tamin’ity taona ity raha oharina tamin’ny taona lasa. “Anisan’ny nampirongatra ny valanaretina ny fisian’ny tondra-drano tamin’ny faritra maro vokatry ny rivo-doza izay nandalo. Nampihanaka ny tazomoka ihany koa ny tsy fandriampahalemana satria tsy matory an-trano ny ankamaroan’ny olona. Amin’ny alina nefa no tena manaikitra ny moka mitondra ny tazo”, hoy ny Dr Rakotoarivony Manitra, talen’ny fampiroboroboana ny fahasalamana ao amin’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka.
Ny fametrahana fitaovana sy fanafody handraisana an-tanana an’ireo aretina ahiana hirongatra aorian’ny tondra-drano no efa nataon’ny minisitera nanomboka tamin’ny 10 febroary lasa teo. Anisan’izany ny faritra avaratra sy ny faritra atsinanana sy ireo faritra vitsivitsy any atsimo izay nojerena akaiky tamin’izany. Manentana ny vehivavy bevohoka mba hanatona tobim-pahasalamana hanara-maso ny fitombon’ny vohoka ary haka ilay fanafody entina miaro azy sy ny zaza ao ambohoka amin’ny aretina tazomoka ny minisitera
Marihina fa nahatratra enina amby roapolo sy eninjato sys ivy arivo sy roa alina ny trangana tazomoka tamin’ny volana novambra 2019 tany amin’ny faritra dimy nahitana an’izany.
Fahatsiarovana mpanoratra :: Noraketina ho boky ny tantaran’ny mompera Rahajarizafy Antoine de Padoue